အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျန်းမာရေးအတွက် ရေညှိတစ်ခွက်
28 Responses to “ကျန်းမာရေးအတွက် ရေညှိတစ်ခွက်”
ဗဟုသုတ ရစရာတွေပေါ့၊ မနက်ဖြန် ဂျပိန် ... အဲ စပိန် နိုင်ပါ့မလား ...း)
ဦးဦးဖျားဖျား ရေညှိဟင်းချိုလေး စိတ်ကူးထဲမှာ ဈေးဦးဖောက်သောက်သွားပါတယ်။ (အပြင်မှာက သူ့အနံမကြိုက်လို့ မသောက်ရဲဘူး) :)
ဗဟုသုတရစေတဲ့ ဒီလိုပို့စ်မျိုးလေး များများတင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါ၏။
ရေညှိ ကို အမလည်း ကြိုက်တယ် ကျောက်ပွင် အမျှင်သေးသေးလေး တွေ သုတ်စားတဲ့ ဟာ နီညိုအမျှင် လေးတွေ ဒီလောက်ထိတော့ မသိဘူး ကြိုက်တာတခုဘဲ ညီမ ရေးပေးမှ အစုံ သိရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးနော်
ကျွန်တော်က တော့အခုချိန်ထိ မကြိုက်သေးဘူး ဗျ၊
ရေညှိ အလွန်ပေါ တဲ့တိုင်းပြည် မှာ ရောက် နေတာတောင်
ထမင်းဘူးထဲ ပါရင် ဖယ်ဖယ် ထုပ်နေတတ် တုံး လေ၊
အသေးစိပ် ဖတ်ရတော့စားသင့် မှန်းပိုသိ ပြီး စား ဖြစ်အောင်
မစား ချင်လဲ စားချင်အောင်ကြိုးစားရတော့မယ်လေ။
မချောရေ... ကျနော်က ရေညှိဆို သိပ်ကြိုက်။
ဒီမှာလဲ အခွင့်သာတိုင်း ဆိုင်ကြီးတွေမှာ သွားသွားရှာနေမိတယ်။ ဒီအတိုင်းဝါးစားတာလဲကြိုက်တယ်။ ဟင်းချိုလုပ်ပြီးသောက်ရတာလဲ ကြိုက်တယ်။ ကောက်ညှင်းစတဲ့ အစားအစာနဲ့ လိပ်ပြီး စားရတာလဲ ကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်ရင်း တံတွေးမျိုချပြီး ပြန်သွားရပါကြောင်း။းဝ)
ပဲပင်ပေါက် အားလူးပြုတ်ပါးပါးလှီး မြေပဲဆံ ပဲမှုန့် ငရုပ်သီးစိမ်း ငနီတူခြောက်လေးတွေနဲ့
ရောသမနယ်ပြီး မမြသွေးနဲ့ မချောကို သုတ်ကျွေးမယ်ဗျာ။ :)
ရေညှိကို အရမ်းကြိုက် ဒီလိုသိရတော့ ပိုစားဖြစ်တော့မှာပေါ့
ကျောက်ပွင့်သုပ်တော့ကြိုက်တယ် ရေညှိလည်းကောင်းပါတယ်။ ဗဟုသုတရစေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ.........
အမ ညီမလေးလဲအရမ်းကြိုက်တယ် ... အခုတောင်စားချင်လာပြီ ..အမပြောသလို ကြက်ဥရေညှိလုပ်စားအုံးမှ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ........နောင်လဲ အားပေးနေမယ်နော်..............
ရေညှိတော့ သိပ်မစားဖြစ်ဘူး။ကျောက်ပွင့်ကိုတော့သိပ်ကြိုက်...။ထမင်းသုပ်ထဲ ထည့်သုပ်စားရရင်
အရမ်းကောင်းပေါ့..။ပြောရင်းနဲ့ကိုစားချင်လာပြီ။ရေညှိနဲ့ ကျောက်ပွင့် ကတူတူပဲဆိုတာ ခုမှသိတော့တယ်။
ကျွန်တော့် အခန်းဖော် တရုပ်တွေကတော့ အဲဒီလို ရေညှိဟင်းချိုမျိုး မကြာမကြာချက်စားကြတယ်..။
မမ....ရေညှိရော၊ ကျောက်ပွင့်ရော မကြိုက်ပေမယ့် ငါ့အစ်မချက်ကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့
မမရေ....မဆီမဆိုင် Shayne Ward ရဲ့ Breathless ကြောင့် ငိုချင်သွားလို့ ပြန်ပြီး((
July 11, 2010 at 6:10 AM
မချော.......ရေညှိအကြောင်းဖတ်ရတာ ကျောင်းတုန်းကစာတွေကို ပြန်အမှတ်တရဖြစ်မိပါတယ်
အဲ...သားသားတော့ ရွံ့လို့ ခုထိ မစားရဲသေးဘူး
ခုလို ပုံလေးတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ တင်ပြအားကောင်း
ရေညှိရော ကျောက်ပွင့်ရော အရမ်းကြိုက်တယ်။ အစိမ်းတွေမြင်ရတော့ တမျိုးကြီးပဲနော်။
အမကတော့ ရေညှိကို ဒီတိုင်းလဲစားတယ်။ ကြက်ဥနဲ့လိပ်ကြော်ပြီးလဲစားတယ်။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တို့ ဟင်းချိုတို့ထဲလဲ ခပ်စားတယ်။
ဒါနဲ့ ရှမ်းရေညှိလဲ စားလို့ကောင်းတယ်နော်။ စားဖူးလားမသိဘူး။ စပ်စပ်ကလေး ငရုတ်သီးတွေပါတယ်။
အမတို့ဆီက စပီရူလိုင်းနား ဆိုပြီး ဆေးတောင်ထုတ်လိုက်သေးတယ်လေ...၊ အမက ချောပြထားတဲ့ ရေညှိထုပ်လေး အကြွပ် အခြောက်ထုပ်လေး Tao Kae Noi ကြိုက်တယ်၊ အရသာ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်လေ...အမ Natural Flavor စားလေ့ရှိတယ်...:))
I love this post . I am gonna share to my family . Let me share in my FB too . =)
တား မစားတတ်ဖူး အနံကြီးကိုမခံနိုင်တာ တားကြိုက်တာ ဒညင်းတီးနဲ့ဒူးရင်းသီးး)
ဒီက ထမင်းဘူးတွေတိုင်းမှာ အရန်ဟင်းလျာ တမျိုး အနေနဲ့ ရေညှိ ထည့်ပေးကြတယ်။
အနံ့မခံနိင်လို့ မစားဖြစ်ဘူး။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတာတောင် လျှာတစ်ချောင်း ကို
မကောင်းဘူး .. မကောင်းဘူး...။
ရေညှိ အသုံးဝင်ပုံ ဗဟုသုတများကို တပွေ့တပိုက် ဖတ်မှတ်ယူသွားပါတယ် ..။ ပုံလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်တာပဲ..
ရေညှိတော့ မစားမိပါ ကျောက်ပွင့်သုတ်တော့ အရမ်းကြိုက်ပါသည်။
ဗဟုသုတ ဖြစ် ဖတ်သွားပါသည် မမချော...
မချောခင်ဗျာ ကျနော်ဖတ်ရင်းကြိုက်၍ ကျနော့ဘလော့ဂ်မှာထပ်ယူတင်လိုက်တယ်နော်။ခွင့်ပြုမည်ဟုထင်ပါသည်။အမဆိုဒ်၏လင့်ခ်ကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
လေးစားစွာဖြင့် . . . . .
ရေညှိ ဗဟုသုတနဲ့ ရေညှိဟင်း ကိုဖတ်သွားပါတယ်ရှင်
sar mae...sar mae...
I love to eat sea weeds.
မမချောရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ................
ညီမ အတွက် ဟင်းအသစ်တမျိုးတိုးသွားလို့ပါ